သားသမီး၇ယောက်ရှိသော်လည်း ပြုစုစော င့်ရှော က်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ ဆေးရုံစင်္ကြံမှာ See more..သားသမီး၇ယောက်ရှိသော်လည်း ပြုစုစော င့်ရှော က်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ ဆေးရုံစင်္ကြံမှာ See more..
သားသမီး၇ယောက်ရှိသော်လည်း ပြုစုစော င့်ရှော က်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ ဆေးရုံစင်္ကြံမှာ အိမ်အဖြစ်နေ ထိုင်နေရတဲ့ မိခင်အိုကြီးရဲ့ သနားစရာဘဝ အသက် ၆၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စ Huong ကအသ က်ကြီးမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သားသမီးမြေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းမယ့်အစား ဆေးရုံစင်္ကြံမှာသူ့အိမ်အ ...
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား မချစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကတော့……“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား မချစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကတော့……
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား??? ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ဖူးပါ ကျွန်တော် အခုလို ပြောလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူစာအုပ် လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရသူတစ်ဦးလို့ သမုတ်ရင်လည်း ကျွန်တော် ...
အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီးအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီး
အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီး ဖုန်စုပ်စက်ရဲ့ပလပ်ကိုကိုက်ဖြုတ်ပြစ်ခဲ့သည့်ဝက်ကလေး ရှေးလူကြီးများ၏အဆိုအရ ဝက်မျိုးစိတ်တွေဟာအနည်းငယ်ညစ်ပတ်သောမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုဆိုကြပါတယ်။သို့သော်လည်းလူအချို့တို့သည့် ချစ်စဖွယ်ဝက်ကလေးတွေကိုနေအိမ်ပေါ်တွင်ခေါ်ထားပြီးမိသားစုဝင်တွေလိုမွေးမြူထားတတ်ကြပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း အမေရိကန်ကော်လိုရာဒိုရှိ နေအိမ်တစ်ခုမှမွေးမြူထားသောဝက်ကလေး၏အပြုအမူဟာ မြင်တွေ့သူတိုင်းကိုချစ်စဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဝက်လေးဟာအိမ်၏ဆိုဖာပေါ်တွင်ဇိမ်ကျစွာအိပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ရာ စုန်စုပ်စက်သံကြောင့်ဝက်ကလေးကနိုးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် ဝက်ကလေးကအိပ်ရာကထလာပြီးဖုန်စုပ်စက်ပလပ်ပေါက်ကို သူ၏ပါးစပ်ဖြင့်ကိုက်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily ...
အမေဖြစ်သူက နေမကောင်းတာကြောင့် မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ရန်အတွက် သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်ရောင်းချနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ)အမေဖြစ်သူက နေမကောင်းတာကြောင့် မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ရန်အတွက် သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်ရောင်းချနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ)
အမေဖြစ်သူက နေမကောင်းတာကြောင့် မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ရန်အတွက် သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်ရောင်းချနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Quezon City မြို့ရှိ Kenneth Pangilinan အမည်ရှိကောင်လေးတစ်ဦးဟာ ထက်မြက်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲများမှ ဆုတံဆိပ်များစွာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။Kenneth ဟာ အမေနှင့်အစ်ကိုဖြစ်သူတို့နှင့်အတူ သေးငယ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာ ...
သင့်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိနေခြင်းဟာ သင့် ကို ချစ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိခြင်းထက် သင့်ဘ၀အတွက် ပိုမို ကံကောင်းစေပါတယ်သင့်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိနေခြင်းဟာ သင့် ကို ချစ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိခြင်းထက် သင့်ဘ၀အတွက် ပိုမို ကံကောင်းစေပါတယ်
သင့်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိနေခြင်းဟာ သင့် ကို ချစ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိခြင်းထက် သင့်ဘ၀အတွက် ပိုမို ကံကောင်းစေပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကသင့်ကိုချစ်တဲ့လူ တော်တော်များနိုင်ပါတယ်။သင့်ကိုနားလည်တဲ့သူကျတော့ လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရပါတယ်။ဥပမာ.. ချစ်တော့အရမ်းချစ်ပါရဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ လွတ်လပ်မှု မခံစားမိဘူးခဏခဏ သဘောထားကွဲကြတယ်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲကြတယ်။သင်က ဒီလိုစဉ်းစားတယ်လေအော်ငါ့ကိုများ ...
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလောက်အောင် အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ အခြေနေကြီး (ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမှာလဲ)ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလောက်အောင် အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ အခြေနေကြီး (ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမှာလဲ)
မြန်မာပြည်မှာ စာသင်တယ်။ စာအုပ်အောက်ပြုတ်ကျရင် စာမရမှာကြောက်လွန်းလို့ စာအုပ်ကို ကန်တော့ကြတဲ့ ကလေးတွေ ဘွဲ့ရလာကြပေမယ့် တော်သင့်ရုံဘဲ တတ်သွားကြတယ်။ စာအုပ်ထဲ ရှိပြီးသားစာတွေကို မှတ်စုကူးပြီး ၏/သည်မရွေးကျက်ရတဲ့နိုင်ငံမှာ ပထဝီတွေ သမိုင်းတွေအလွတ်သာကျက်ခဲ့ရတယ် မေးလိုက်တဲ့ခါ အမ်.. အင်.. ဟုတ်မယ်.. ...
ရှင်သန်ခြင်းတွေမှာ မောနေပြီလား???ရှင်သန်ခြင်းတွေမှာ မောနေပြီလား???
ရှင်သန်ခြင်းတွေမှာ မောနေပြီလား??? ဘဝက ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အရာ မဟုတ်တော့ တစ်ခါတစ်လေ ခက်ခဲချင်ခက်ခဲမယ်ကြမ်းတမ်းချင်ကြမ်းတမ်း လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရပ်နေလို့မှမရတာ ကြိုးစားလျှောက်ရမှာပဲလေ။ တစ်ခါတစ်လေ လူမှုရေးပြဿနာတွေတစ်ခါတရံ အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊မိသားစုရေး၊ငွေကြေးအဆင်မပြေမှုစတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့လဲ ကြုံရမှာပါပဲ။ရှောင် လွဲလို့မရတဲ့ လောကသဘောတရားတွေမှာ ထိုင်တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေလို့လည်း မပြီးမယ့်အတူတူ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ...